Archive du 20181218
Hala-bato goavana Mitombo ireo mijoro vavolombelona
Miseho hatrany ireo endri-javatra manaporofo fa misy ny tetika maloto kendren’ny kandida laharana faha-13 hangalaram-bato sy hanatsimbadihana voka-pifidianana, araka ny fijoroana vavolombelona nataona olona maro omaly.
Andry Rajoelina Manao hevi-jaza sisa, hoy Berija
Nifarana omaly ny fampielezankevitry ny fihodinana faharoa ho amin’izao fifidianana ho filoham-pirenena izao. Nanamarika indrindra azy iny moa ny fifanatrahana 2 nataon’ireo kandida tao amin’ny TVM.
Rivo Rakotovao Tsy hanaiky ny hoso-pifidianana
Tonga nampandre ny filoham-panjakana, Rivo Rakotovao, mikasika ny fametrahan’izy ireo eny anivon’ny tompon’andraiki-panjakana mahefa ny fitoriana mikasika ny fahatrarana kara-panondro
Voka-pifidianana Zava-dehibe ny fiandrasana azy am-pitoniana
Nifarana omaly sasakalina ny fampielezan-kevitra ho an`ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ary miroso amin`ny fahanginana ara-pifidianana (silence electoral) isika anio.
Edito Mandrosoa hasina !!
Tonga ity ny fotoana hahafahantsika manova ny tantaram-pirenena indray. Ny hirariana dia mba ho tena ho tantara vaovao tokoa amin’izay manomboka amin’io rahampitso io no hosoratantsika ho antsika, indrindra ho an’ny taranaka faramandimby.
La grande braderie de Madagascar Handray anjara mavitrika ny ketrika.com
Hotanterahina ny 20 ka hatramin’ny 24 desambra ho avy izao etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ilay hetsika La Grande Braderie de Madagascar andiany farany amin’ity taona 2018 ity, karakarain’ny Madavision.
Fampiroboroboana ny asa tanana Malagasy Miteraka asa avy hatrany
Notoloran’ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka mari-pahavitana fiofanana tetsy amin’ny tranombokim-pirenena ireo mpiofana mpanao asa tanana miisa 151 avy etsy amin’ny Ivontoeram-pirenen’ny Asa tanana Malagasy (CENAM).
Famaranana ny taona Ho avo telo heny ny fahafahana mampiasa aterineto
Raha toa ka avo roa heny ny fahafahana mampiasa aterineto natolotry ny orinasa Telma ny mpanjifa azy nanomboka ny jona 2018 teo dia hiakatra avo 3 heny indray izany amin’izao fiafaran’ny taona 2018 izao miaraka amin’ny tolotra 4G by telma sy ny Mvola,